Забур 124 CARS - Nnwom 124 AKCB
ma Israel nka,
bere a nnipa tow hyɛɛ yɛn so,
3bere a wɔn abufuw sɔre tiaa yɛn a
anka wɔmemenee yɛn anikann;
4anka nsuyiri no bebu afa yɛn so,
anka ɔhweam no bɛtwe yɛn akɔ,
5anka nsu a ano yɛ den no
bɛpra yɛn kɔ.
6Ayeyi nka Awurade a
wamma ho kwan amma wɔamfa wɔn se antetew yɛn mu.
7Yɛaguan sɛ anomaa
afi ofirisumfo afiri mu;
wɔabubu afiri no,
AKCB : Nnwom 124